ထန်တလန်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 22°41′57″N 93°25′41″E﻿ / ﻿22.69917°N 93.42806°E﻿ / 22.69917; 93.42806ကိုဩဒိနိတ်: 22°41′57″N 93°25′41″E﻿ / ﻿22.69917°N 93.42806°E﻿ / 22.69917; 93.42806
ထန်တလန်မြို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်တွင် ပါဝင်ပြီး ထန်တလန်မြို့နယ်၏ မြို့နယ်ရုံးစိုက်ရာ မြို့ ဖြစ်သည်။
၃ ၂၀၂၁ ဖြစ်စဉ်
ထန်တလန်မြို့သည် ချင်းပြည်နယ်မြို့တော် ဟားခါးမြို့မှ ၂၅ မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ကုလားတန်မြစ်သည် ဟားခါးမြို့နှင့် ထန်တလန်မြို့များ အကြားမှ စီးဆင်းကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွင်းသို့ စီးဝင်သွားပြီး ပလက်ဝမြို့နေရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဖက် ပြန်လည်စီးဆင်းလာကာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်းသို့ စီးဝင်သွားသည်။ ထန်တလန်မြို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် နယ်နမိတ်ထိစပ်နေသည်။
အေဒီ ၁၄၅၀ ခုနှစ်တွင် လှောင်ဇန်ရွာဟု တည်ရှိခဲ့ရာမှ အေဒီ ၁၅၀၀ ခန့်တွင် လေးမိုင်ခန့်ကွာဝေးသော တထန်တလန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တထန်တလန် ဟူသည်မှာ သွေး၊ ချွေးဖြင့် တည်ဆောက်သော ရွာ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ၁၉၆၁-၆၅ တွင် ယခုနေရာသို့ ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် တထန်တလန် မှ ထန်တလန် ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက် မှ ၂၁ ရက် နေ့အထိ ဟားခါးနှင့် ထန်တလန်မြို့အကြားတွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(ထန်တလန်)နှင့် စစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ 
ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်တွင် ပလကရပ်ကွက်ရှိ ရဲစခန်းအနီးတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ကလေးတစ်ဦး သေဆုံးပြီး အခြား အရပ်သား ၂ ဦးလည်း ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ 
စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ထန်တလန်မြို့တွင်းရှိ စစ်တပ်၏ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုအား ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်(ထန်တလန်) မှ ရှောင်တခင်ဝင်တိုက်သည်။ နှစ်ဘက်ပစ်ခတ်ကြသည့်နောက်တွင် အရပ်သား ၄ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် ပြန်ဆုတ်သည်တွင် စစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးဖြင့် ရမ်းကား ပစ်ခတ်ရာ နေအိမ်တစ်လုံး မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည်။ 
မြို့တွင်းတိုက်ပွဲများ ဖြစ်လာသည့်နောက် မြို့ခံအချို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ရှိ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ ဝင်ကြ၏။ အိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရ သည် မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တို့ကို လက်မခံ။ သို့သော် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရက ကယ်ဆယ်နေရာချရေး မစီစဉ်ပေးသော်လည်း ပြန်မပို့ဟု ကြေညာထားသဖြင့် ထိုသို့ ပြေးကြရခြင်းဖြစ်သည်။ 
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၌ ဂျွန်ဆင်အောက်မေ့ဖွယ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ဘုရားကျောင်းသို့ လက်နက်ကြီးကျည်ကျကာ ပျက်စီးမှု ရှိခဲ့၏။  ယင်းနောက် စစ်တပ်မှ စစ်ရေးအချက်အချာကျသော နေအိမ်တို့တွင် နေရာယူထားပြီး စစ်ရှောင်နေအိမ်တို့မှ ပုဂ္ဂလိက ပစ္စည်းတို့ကို ၎င်းတို့ သဘောရှိ သုံးစားသည်။ 
စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ထန်တလန်မြို့ PDF နှင့် မြို့ပေါ်တွင် စောင့်ကြပ်နေသော စစ်တပ်မှအဖွဲ့များ ၆ နာရီကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲ ဖြစ်သောကြောင့် PDF နှင့် စစ်တပ် တစ်ဖက်လုံးက ထန်လန်ပြည်သူတို့၏နေအိမ်များကိုအကာကွယ်ယူပြီး အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ စစ်တပ်မှ ၎င်းတို့တပ်များ သေနတ်ခြင်း ယှဉ်ပစ် ရာတွင် ရှုံးသောအခါတွင်မူ တပ်ခွဲအဆင့်လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ လူနေအိမ်ပေါ်ကျ၍ အိမ်များ မီးလောင်ခဲ့သည်။  မီးလောင်နေသောနေအိမ်များအား မီးငြှိမ်းသတ်ရန်ကြိုးပမ်းသည့် ဒေသခံလူငယ်များကို စစ်တပ်ဘက်က ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် ထန်တလန် ရာပြည့်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းတော် (TCBC) ၏ သင်းအုပ် ဆရာ ပါစတာ ကျူံးဗျက်ဟုမ်း (Pastor Cung Biak Hum) ကျည်ထိသေဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် နေအိမ် ၁၉ လုံး လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။
နောက်တစ်ရက်တွင် မြို့ပေါ်နေလူထုတို့ နေရပ်စွန့်ကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်သို့ တိမ်းရှောင်ကြရပြီး မိသားစုတချို့သာ ကျန်ခဲ့၏။  
PDF တပ်၏ အလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏ ခံရသည့်နောက် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်တွင် စစ်တပ်မှ စခန်းချရာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ထန်တလန်မြို့ရှိ လူထုကို မြို့မှရှောင်ရန် အမိန့်ထုတ်ထားပြီး ၂၁ ရက် နေ့အထိ နောက်ဆုံးအဖြစ် ရက်ချိန်းပေးထားသည်။ 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ အချိန်ခန့်မှ စတင်၍ ထန်တလန်မြို့တွင် ဈေးဆိုင်တစ်ခုကို ဖောက်ထွင်းနေသည့် စစ်ကောင်စီ စစ်သားကို ထန်တလန် PDF အဖွဲ့က ပစ်သတ်လိုက်ပြီးနောက်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီး နေအိမ်များကို ဝင်ရောက်မီးရှို့ခြင်းများပါလုပ်ဆောင်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ထန်တလန်မြို့ပေါ်ရှိ Church on the Rock (COTR) ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း နှင့် Presbyterian ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း အပါအဝင် အိမ်ခြေ ၁၅၀ ကျော် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ ထန်တလန်မြို့ပေါ်တွင် စုစုပေါင်း အိမ်ခြေ ၁၈၀၀ ကျော်ရှိပြီး လူဦးရေ ၁၀၀၀၀ ကျော် နေထိုင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း စစ်တပ်မှ ခြိမ်းခြောက်မှုများကြောင့် မြို့လုံးကျွတ်နီးပါးရှိ ပြည်သူများလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇူရမ်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာများသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ 
↑ ထလန်တလန် သို့မဟုတ် ထန်တလန် သွေး နဲ့ ချွေးနဲ့တည်ထောင်တဲ့မြို့ (in my)။
↑ "အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ လက်နက်ကြီးကျည်ကြောင့် ထန်တလန်မြို့ခံ ၁၀နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်သေဆုံးခဲ့ပြီး နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ ဟုဆို". Myanmar Peace Monitor. 2021-08-27.
↑ "ထန်တလန်မြို့ ပစ်ခတ်မှုတွင် ၁၀ နှစ်ကလေးတစ်ဦး ကျည်ထိလို့ သေဆုံး Archived3November 2021 at the Wayback Machine.". The Chin Journal. 2021-08-25.
↑ "ထန်တလန်မြို့တိုက်ခိုက်မှုတွင် စစ်သား ၂ ဦး သေ၊ အရပ်သား ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ". Myanmar Now. 2021-09-10.
↑ "ထန်တလန်မြို့တွင်း တိုက်ခိုက်မှုတွင် အာဏာသိမ်းတပ်က လူနေရပ်ကွက်တွင်း လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်၍ အရပ်သား (၄) ဦး ဒဏ်ရာရ". Tachileik News. 2021-09-09.
↑ "၄ ရက်အတွင်း မီဇိုရမ်းဘက်သို့ မြန်မာစစ်ဘေးရှောင် ၁၈၀၀ ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် Archived3November 2021 at the Wayback Machine.". Zalen Media. 2021-09-15.
↑ ၈.၀ ၈.၁ "ထန်တလန်မှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ CDF တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ အိမ် ၁၀ လုံးထက်မနည်း မီးလောင်ဆုံးရှုံး". RFA Burmese. 2021-09-18.
↑ "၂။ ထန်တလန်မြို့ပေါ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်သားများက ပစ္စည်းနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား ခိုးယူမှုရှိနေသည်ဟုအသံများထွက်နေသည်။". 2021-09-17.
↑ "ထန်တလန်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်၏ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသခံများ၏ နေအိမ်များ မီးလောင်ပျက်စီး". 74 Media. 2021-09-18.
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ သင်းအုပ်ဆရာ သတ်ဖြတ်ခံရသည့် ထန်တလန်မြို့တိုက်ပွဲ (in my)။
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ထန်တလန်တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံ တစ်သောင်းကျော် ထွက်ပြေးနေ၊ သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦး ပစ်သတ်ခံရ (in en)။
↑ "စစ်ကောင်စီရဲ့ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ထန်တလန်မြို့ မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံလူငယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်". ခေါနုသုန်. 2021-09-21.
↑ "ထန်တလန်ပြည်သူများ မြို့မှစွန့်ခွာပြီး အိန္ဒိယနယ်စပ်သို့ စစ်ရှောင်များလာ". Federal Journal. 2021-09-20.
↑ "ထန်တလန်တစ်မြို့လုံး နီးပါး စစ်ဘေးရှောင်". BBC Burmese. 2021-09-20.
↑ "ချင်း ထန်တလန်မြို့ တမြို့လုံးနီးပါးတိမ်းရှောင်နေရ" VOA News. 2021-09-20.
↑ "အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ထန်တလန်တမြို့လုံးနီးပါး နေရပ်စွန့်ခွာ". DVB Burmese. 2021-09-20.
↑ စစ်တပ်ရှို့မီးကြောင့် ထန်တလန်မှ အိမ် ၁၆၀ ကျော်မီးလောင်ဟု CDF ပြော (in my)။
↑ ထန်တလန်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်၏အကြမ်းဖက်မှု အရေးယူမည်ဟု CRPH ပြော (in en) (30 အောက်တိုဘာ 2021)။
↑ "". 2021-09-30.
"Tlantlang Google Satellite Map" Maplandia.com
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထန်တလန်မြို့&oldid=736542" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၀:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။